Xanuunkan maskaxda ku dhaca qofkii qaba 'iska ilaali'
Home Aragti-doon Xanuunkan maskaxda ku dhaca qofkii qaba ‘iska ilaali’
Xanuunkan maskaxda ku dhaca qofkii qaba ‘iska ilaali’
Xanuunkan qofkii qaba - dadka lama heshiin karo, mana katagi karo!!!
Waa xanuun halis ah balse la daweyn karo.... GETTY IMAGES
Xanuunka ‘Borderline personality disorder’ waa xaalad maskaxda ku dhacda taas oo saameysa sida aad u fikireyso iyo qaabka aad u dareemeyso naftaada iyo dadka kaleba, waxaana ka dhasho sida ay noloshaada maalinlaha noqoneyso.
Waxaa dhibaatada ka mid ah in naftaada iyo jirkaaga ay kula foolxumaadaan, in dareenkaaga iyo dabeecadahaaga aad xakameyn weydo iyo xiriirka dadka kaala dhexeeya oo noqda mid aan sal-dhigneyn.
Cudurkan qofka qaba waxaa lagu arkaa in cabsi badan oo kelinimo ah uu qabo, iskuna kalsooneyn. Sidoo kale umaba dulqaadan karaan cidlada, mana lahan dabeecad ay dadka kale kula joogaan.
waxaa kaloo lagu arkayaa xanaaq badan, iyo isbedbedel badan oo dhanka dabeecadaha iyo la dhaqanka dadka ah – xitaa iyagoo doonaya xiriir waara in dadka ay la yeeshaan.
Waa xanuun ku badan carruurta iyo dhallinyarada, balse dadka marka ay sii duqoobaan wuu ka dhammaadaan.
Haddii xanuunkan aad isku aragtay, ha niyad-jabin. Dad badan oo cudurka qaba way ka fiicnaadeen ka dib markii la daweeyay, ayna barteen in nolosha ay ku qancaan.
Haddii aad isku aragto astaamaha hoos ku xusan, la hadal dhakhtar si aad u hagaajiso dabeecadahaaga.
‘Borderline personality disorder’ waxay saameyneysaa sida aad naftaada u aragto, sida dadka kale aad isula xiriirineyso iyo qaabka aad u dhaqmeyso.
Cabsi aad u badan oo ah in lagu cidleeyo ama lagaa tago – xitaa in aad qaado tallaabooyiin halis ah oo aad uga hortageyso in lagu cidlooyo ama lagu diido.
In xiriirka dadka kaala dhexeeya uusan xasillooneyn – sida in qof aad ku amaato ‘mid wanaagsan’ haddana isla markiiba aad aaminto in qofaas uusan ku daneyneynin, ‘qof xunno uu yahay’.
Isbedel degdeg ah oo ku dhaca sida naftaada aad u aragto – sida in aad bedesho yoolkaaga iyo hiigsigaaga iyo in aad naftaada isu aragto qof xun in aad tahay, ama in aad tahay qof aan jirinba.
Walwal badan oo ka dhasha cabsi iyo in aad noqoto sida qof xaqiiqada aan rabin – taas oo ku haynaysey daqiiqado illaa saacado.
Dabeecado iyo dhaqamo halis ah – taxadar la’aan, nuf-hurid, dhaqaale-ku-ciyaar, cunto-badsi, daroogo iyo in adiga aad is lug-goyso oo guushaada aad ku ciyaarto – sida shaqo fiican oo aad isaga tagto ama xiriir wanaagsan oo aad jarto.
Dabeecado ah in aad is-disho, ama naftaada dhaawacdo – adigoo ka falcelinaya cabsi ah cidlanimo ama dayrin.
Shucuur isbedbedel badan oo saacado ama maalmo aad dareento – farxad-badan, xanaaq, ceeb ama walwal ah.
In aad isu qaadato sida qof faaruq ah oo aan waxba maskaxdiisa aysan ku jirin.
Qof aan waxba ku wanaagsanayn ama xanaaq xad-dhaaf ah – in aad si fudud ku xanaaqdo, ama hadalka aadan caddeynin iyo aflagaado – ama dagaal iyo gacan ka hadal.
Halista ka dhalan karta
Xanuunkan wuxuu noqon karaa mid la iska dhaxlo ama sababa xaalad cakiran oo carruurnimadaada aad la kulanto.
Haddaba ‘Borderline personality disorder’ wuxuu saameyn karaa qeybo badan oo noloshaada ka mid ah – xiriirkaaga jaceyl, shaqadaada, waxbarashadaada, ladhaqanka bulshada iyo arrimo kale, waxaana ka dhalan kara arrimahan hoose:
In si joogto ah shaqooyiinka lagaaga ceyriyo
In maxkamad lagula koro ama aad xabsi muteysato
Dagaal iyo colaad joogto ah iyo walbahar aan bixin oo ka dhashay burburka xiriirka
In aad naftaada dhibaateyso – gubitaan, dhaawac kale – iyo in isbitaal aad si joogto ah u taallo
In aad noqoto qof dadka ku xadgudba
Illaa qofka uu gaaro heer uu is dilo
Xilliga ay wanaagsan tahay in dhakhWhen to see a doctor
Haddii aad ogtahay in mid ka mid ah astaamaha kor ku xusan aad qabto, hadda dhakhtar la hadal ama khabiir dhanka maskaxda ku taqasusay.
Previous articleArrimaha ka maqan noloshaada iyo sababta ay muhiim ugu yihiin guusha
Next articleCuntooyiinka halista ku ah Kelyaha haddana aan laga maarmin